I-Turin WaldensianCentre e-Torre Pellice, e-Valpellice - I-Airbnb
I-Turin WaldensianCentre e-Torre Pellice, e-Valpellice
Torre Pellice, Piemonte, i-Italy
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Lorenzo B
I-Petite Studio Apartment eseduze ne-Waldensian Cultural Centre edumile e-Torre Pellice, enokubukwa okuhlaba umxhwele kwezintaba nebanga lokuhanjwa ngezinyawo ukuya kuma-Bar, Izindawo zokudlela Ama-Supermarket, i-Public-Transport, Isikhungo Sezokuvakasha
Uzobe uvuka njalo ekuseni ukuze ubuke indawo enhle ukusuka embhedeni wakho obheke izihlahla,Izintaba & isikhumbuzo somlando se-Torre Pellice kusuka ewindini lokuphumula elikhanyayo/lombhede laleli fulethi elihle le-petite studio. Indawo inomuzwa obabazekayo, wesimanje okhululekile futhi ohehayo.
Itholakala maphakathi futhi isenhliziyweni ye-Waldensian Valleys yase-Torre Pellice e-Metropolitan yase-Turin engxenyeni esentshonalanga esenyakatho yesifunda sase-Piedmont e-Italy, yifulethi elincane elisanda kulungiswa elinombono wokuphefumula, ukukhanya okuningi kwemvelo kanye nomakhelwane oqabulayo.
Le ndlu iseduze ngokoqobo ukusuka esikhungweni esibalulekile samasiko sase-Waldensian esineMnyuziyamu yase-Waldensian.
Ifulethi liqhele ngemizuzu engu-5 kusuka ezitolo ezincane zezinto zakudala, izitolo zegelato, izindawo zokudlela, amabha, amakhemisi, amabhange endawo, isikhungo sezivakashi futhi liqhele ngemizuzu engu-8 ukuya esitolo esikhulu kanye nesistimu yezokuthutha yebhasi engakuyisa edolobheni elikhulu kakhulu njenge-Pinerolo bese uya e-Turin.
I-Torre Pellice ibungaza iqembu elibalulekile le-hockey ye-ice. I-Hockey Club Valpellice, i- milita e-Serie skating arena imayelana nemizuzu engu-10 ukusuka efulethini.
Ehlobo, leli dolobha lijabulisa kakhulu futhi liyadumaza okukhuthaza umuntu ukuba aphume ukuze abe nesikhathi esimnandi. Uma unenhlanhla yokuba lapha, njalo ngoLwesihlanu phakathi kuka-08h00 a.m. no-12h00 p.m. uzokwazi ukuhlola izimakethe zendawo zase-Italy, okuyizindawo ezijabulisayo lapho ungabona khona ingxenye yomphakathi wase-Italy futhi ufunde kabanzi mayelana namasiko endawo kanye nokuziphatha ngomculo odlalwa bukhoma ngemuva.
Leli fulethi lilungele ama-Honeymooners, izithandani, abangane, osebenza nabo, abahambi abangashadile.
Ifulethi lisesitezi sesithathu sesakhiwo (indiza yezitebhisi enezitebhisi, alikho ikheshi elihle kakhulu lokugcina ukufaneleka nokusebenza kuyo yonke leyo pasta)
Inombhede owodwa weNdlovukazi nombhede owodwa owusofa, isikhala se-cupbaord kanye netafula elincane elinezihlalo ezimbili ezilungele izidlo zokushona kwelanga. Ayikho i-air conditioning kodwa inomshini omude kagesi wokugcina upholile phakathi nehlobo.
Iholela egumbini lokugezela elilodwa kuhlanganise nendlu yangasese, umcengezi futhi ineshawa enamanzi ashisayo nabandayo, nge-shampoo, ukugeza umzimba, insipho namathawula engeziwe.
IKHISHI ELINCANE: IKHISHI
linezitsha ezanele ozidingayo ukuze upheke ngisho nokudla okukhulu.
-Izinhlobonhlobo zamabhodwe namapani
-Ukugcina izitsha- izinkezo, izimfologo, imimese, amapuleti, izitsha, isosi
knive -Wine opener
-Grater -Salad bow,
-Izibuko ze-Colander -Izibuko ze-Water, izingilazi zewayini, amafulethi e-Champagne.
-Ikhofi nezinkomishi zetiye,
-Kettle -French press coffee plunger
-Ifriji -Amafutha, uviniga, usawoti, upelepele, ikhofi, itiye, ushukela.
-Ikamelo, Into yokudasida, imophu,
Asikho uhhavini, kunesitofu esisebenza ngogesi esiyi-2 kuphela
Uma ungenayo imoto, ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu, isistimu yezokuthutha yebhasi iyatholakala cishe njalo emizuzwini engu-30 kusuka ku- 05h30 ekuseni kuya ku-08h00 ekuseni bese isebenza cishe njalo emizuzwini engu-60 kusukela ngo-08h30 kuya ku-13h00 p.m bese iyaqhubeka futhi njalo emizuzwini engu-30 kusuka ku-13h00 p.m. kuya ku-22h00 p.m.
Izimpelasonto namashejuli amaholide omphakathi awaguquguquki.
UKUDLULISELWA ESIKHUMULWENI SEZINDIZA:
Kuye ngokutholakala kanye nokukhokhiswa, lapho isivakashi sifika umbungazi uzimisele ukuthatha isivakashi esikhumulweni sezindiza, njengoba amatekisi angasese nokuqashwa kwezimoto kungabiza kakhulu.
Ifulethi le-Studio lisanda kulungiswa ngakho konke kupendiwe futhi kwavuselelwa futhi kufenisha entsha.
Zizwe ukhululekile ukushiya umlayezo uma unemibuzo.
Kuyoba injabulo yangempela ukukusiza.
I-Torre Pellice iyinkaba eyinhloko yeSonto lase-Italy i-Waldensian kanye nenhloko-dolobha ye-Montana del Pinervaila Union.
Ehlobo, i-Torre Pellice ijabulisa kakhulu futhi iyakhuthaza ukuthi umuntu aphume abe nesikhathi esimnandi. Uma unenhlanhla yokuba lapha, njalo ngoLwesihlanu phakathi kuka-08h00 a.m. no-12h00 p.m. uzokwazi ukuhlola izimakethe zendawo zase-Italy, okuyizindawo ezijabulisayo lapho ungabona khona ingxenye yomphakathi wase-Italy futhi ufunde kabanzi mayelana namasiko endawo kanye nokuziphatha ngomculo odlalwa bukhoma ngemuva.
Izakhiwo ze-Torre Pellice nezikhungo zifakazela izinto ezingokoqobo njengenhloko-dolobha yomhlaba wase-Waldensian. Singakhuluma nge-Foresteria, i-Museum enamadokhumenti acebile omlando kanye ne-ethnographic, i-Valdese House, njalo ngonyaka ebungaza i-Synod, ithempeli le-neo-Romanesque lika-1852, i-College (manje i-European High School) eyakhiwe ngo-1835, i-Convitto Valdese, eyakhiwe ukukhunjulwa kwama-Waldenese angu-500 ashona eMpi Yomhlaba I, i-Waldensian House kanye neNdlu yama-Deaconesses, indlunkulu yodadewethu abasebenza ezikhungweni eziningi zosizo.
I- "Filippo Scroppo" Civic Gallery of Contemporary Art ihlanganisa ndawonye cishe imisebenzi engamakhulu amane yokudweba, ukudweba nokudweba ngabaculi base-Italy bangemva kwempi, okuhlanganisa i-Carena, i-Cordero, i-Gallizio, i-Levi, i-Menzio, i-Paulucci, i-Rambaudi, i-Ruggeri.
Ukusuka edolobhaneni lase-Ruà, elihlezi endaweni evelele, ungajabulela ukubuka indawo yonke phezu kwesigodi. I-Coppieri township , kanye umngcele we-ghetto lapho amaWaldensians evalelwe khona, namuhla idolobhana langempela, elakhiwe kabusha ngokuphelele.
I-Torre Pellice ibungaza iqembu elibalulekile le-hockey eqhweni, elidala kunawo wonke e-Piedmont elisekhona (nakuba umdlalo wokuqala we-hockey e-Italy wawudlalwa e-Turin ekuqaleni kuka-1907), owazalwa ngo-1934: i-Hockey Club Valpellice, milita e-Seriewagen. Leli qembu liphumelele kakhulu e-Piedmont kulandela ukuhlanganiswa, ngo-2012-13, weNdebe yase-Italy.
Ibungazwe ngu-Lorenzo B
Ngohlelo lokusebenza lwe-Airbnb
Hlola ezinye izinketho ezise- Torre Pellice namaphethelo